China 1550nm Erbium Doped Fiber Amplifier ZOA1550HW Kugadzira uye Fekitori | Zongju
ZOA1550HW akateedzana akakwirira emagetsi imwe mode mode EDFA inozivikanwa neruzha ruzha, yakakwira linearity. Vaka-mune-inoitwa-yakanaka CWDM yakasanganiswa 1490nm / 1310nm dhata yekuyerera kubva ku OLT uye ONU kuita imwechete fiber kutapurirana kuburikidza neEDFA, ichideredza chikamu chekuverenga uye kugadzirisa mashandiro ehurongwa uye kuvimbika. Iyo inopa inochinjika, yakaderera-mutengo mhinduro yeCATV yakakura nzvimbo kufukidzwa kwemadhorobha uye epakati-akakura maguta.
ZOA1550HW dzakateedzana dzakashongedzwa neakapedza APC, AGC, ATC kutonga, yakanakisa dhizaini yekupisa-inopararira iyo inovimbisa nguva yakareba yekushanda uye kugadzikana kushanda kwePUMP laser. RJ45 pane yekumashure kwepaneru inopa SNMP network interface. Iyo yakafara LCD inoratidzira ese ma parameter echikamu chose uye zvinotyisa. Iyo laser ichave ichidzimwa yega kana simba remaziso richishaikwa; inopa chengetedzo yekuchengetedza iyo laser. Ese mabudiro e Optical ari pane epamberi pani (inogona kunge iri kumashure kwepaneru ndeye mutengi tsanangura). ZOA1550HW dzakateerana adopts chete muoti pombi, EDFA uye multi-pombi kusangana nzira. Yakagadzirirwa ruzha rwakaderera, bvumidza kutapurirana kwakajeka kwemavhidhiyo, izwi uye masaini edata. Ruzha rwayo chimiro uye kuvimbika kuri nani zvakanyanya kupfuura zvakapetwa kaviri Yb / Er Amplifiers.
1RU chassis, yakazara goho simba> 1000mW, 8 uplink Optical ports, ye OLT + 8 1550nm kuburitsa Optical port, wedzera 1310/1490 dhata rukova.
2RU chassis, yakazara goho simba> 4000mW, max. 32 uplink Optical ports, ye OLT + 32 1550nm inoburitsa chiteshi chengarava, wedzera 1310/1490 dhata re data.
(1) Yakakwira mhando: iyo yaimbova-kirasi pombi inotora 980nm sediki diki chiratidzo chekukudza, mushure -kirasi inotora 980nm yakakwira simba mizhinji-modhi pombi, simba re Optical rakagadziridzwa nesoftware kudzikisira ruzha nhamba yeEDFA, uye kuita masystem kuwana akanakisa CNR .
(2) Kuchinja-chinja: yakavakirwa-mukati-inoshanda-switching magetsi, inogona kushanda pa 85 ~ 265Vac Guta Network Voltage, pamwe neyakaisarudzika DC48V magetsi magetsi (akachengetedzwa anodikanwa); Chassis inotonhora otomatiki tembiricha kutonga. Mechanical inotonhorera (Dual mafeni) kuseri kwepaneru inobatsira kuita kupisa kwekupararira nekudaro kudzivirira iyo pombi laser
(3) Intuitive: Mushini wakashongedzerwa ne microprocessor inoongorora mamiriro ekushanda eraser, iyo jira reLCD hwindo rinoratidza iwo ma parameter anoshanda.
(4) Network mhando: Sarudza Yese-chidimbu chinzvimbo chekutarisa transponder vimbiso yekusangana neyakajairwa nyika uye inowirirana neSCTE HMS standard, inogonesa network manejimendi kuongorora kugona.
(5) CWDM: Vaka-mune-yakaitwa-yakanaka CWDM yakasanganiswa 1490nm / 1310nm data data kubva ku OLT neOUU
CATV Kushanda wavelength (nm)
OLT pfuura wavelength (nm)
1550nm kupfuura wavelength kurasikirwa (dB)
1310 / 1490nm kupfuura wavelength kurasikirwa (dB)
Wavelength kusarudzika pakati pe1490 / 1550nm (dB)
CATV yekuisa simba (dBm)
Yakazara simba rekubuda (dBm)
Chiteshi chimwe nechimwe chinoburitsa simba (dBm)
Nhamba yekubuditsa chiteshi
Musiyano wesimba rega rega rekuburitsa (dB)
Ruzha nhamba (dB)
System CNR kudzikira (dB)
Polarization kutsamira kuwana (dB)
Polarization modhi yakapararira (ps / nm)
Pombi simba leakage (dBm)
Echo kurasikirwa (dB)
Magetsi (220VAC) (V)
Simba rinopedza (W)
Basa temp. (° C)
Kuchengetedza temp. (° C)
Humidity hune hukama (%)
Saizi (W) × (D) × (H) (″)
Dzokorora Yese mayuniti ane akasiyana akabuda simba reZOA1550HW akateedzana anogona kunge ari 2RU casing.
Pashure: Mid-nhanho Kuwana EDFA (ZOA1550MC)
Zvadaro: Mini Optical Rinofambisa (ZTX1310M / ZTX1550M)